Sida loo Delete Videos ka iPod
> Resource > iPod > Delete Videos ka iPod la Easy
Ma doonaysaa in kaliya tirtirto videos ka iPod halka heyso Lugood? Ma waxaad la fikradaha wanaagsan yahay in la qabto? Haddii aadan, waxaana idin tusin doonaa hab fudud oo fudud.
Si ka iPod tirtirto filimada si fudud oo si sahlan, waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa inaad kala soo baxdo qalab dhinac saddexaad smart, kaas oo kaa caawin kara inaad ka saarto filimada iPod.
Halkan yimaado iPod qalab video saarista smart - Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Waxaa gebi ahaanba awood aad tirtirto videos ka iPod ballaaran ku Taabsiiyo 4 qasabno. Waxaa sugan, waa ku xigeenka saaxiib aad.
Sidee in ay tirtirto filimada ka iPod xiriiri ballaaran
Hadda, bal aynu hawsha ay u dhammaystiraan la version Windows. Sida user Mac ah, oo aad gebi qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah la version Mac ah.
Tallaabada 1. Ku rakib barnaamijkan iyo in ay ku xirmaan iPod xiriiri PC
Ku rakib this iPod qalab video saarista aad kombuutarka ka dib markii ay soo degsado. Waxaa maamula double magcaabo Wondershare file TunesGo.exe aad kombuutarka.
Isticmaal cable tabaneeyo USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod xiriir PC. Markii ay ku xiran tahay, taas iPod qalab video ka saarida waxaa lagu ogaan doonaa oo muujiyaan on interface ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho TunesGo, waxaa idinku waajib ah inaad kala soo baxdo Lugood on your computer ka dibna ku xidh.
Tallaabada 2. Delete videos on iPod taabashada
In geedka buugga bidix, dhammaan macluumaadka ku saabsan iPod taabto waa in column bidix. Si aad u masixi videos on your iPod taabto, waa in aad ku dhufo "Media". Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala warbaahinta ku yaal dhinaca midig. Guji "Movies", mid labaad ee line ugu sareeya.
Daaqadda movie maamulka, movies oo dhan waxay ku qoran yihiin. Dooro filimada in aad go'aansato in aad ka saarto. Ka dib markii in, guji "Delete". Marka uu furmo suuqa yar booda, haddii aad u hubiso in aad rabto in aad tirtirto, filimada uu soo xulay aad iPod taabto, waa in aad ku dhufo "Haa". Markaas, kuwaas oo filimada aan la rabin ayaa la tirtiray.
Ka hor inta aadan ku dhameysan tirka ee filimada la rabin, inaad si fiican u sii lahaa aad iPod taabashada ku xiran aad PC.
Fiiro gaar ah: TunesGo (Windows) si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPod-taabashada, kuwaas oo, iPod xiriiri 5, iPod xiriiri 4 iyo iPod xiriiri 3, halka version Mac ka taageertaa iPod xiriiri 5/4. Ka sokow, haddii aad iPod xiriiri waddaa macruufka 4.0 iyo hoose, waa in aad u cusboonaynta in macruufka 5.0 iyo ka dib (The macruufka dambeeyay 9 waxaa ka mid ah.).
Marka filimada ayaa la tirtiro, waxaa loola jeedaa in aad u suurtagashay in ay tirtirto videos ka iPod taabto. Hadda, wareejin music aad jeceshahay, Podcast iyo sawiro, iyo in ka badan ka computer si aad iPod.